How Honest Are Couples, Really? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
How Honest Are Couples, Really?
တော်တော်တန်တန် ဘယ်သူမှ comment မရေးမယ့် Post မျိုးကို တင်ဆက်လိုက်ရပြန်ပါတယ်
အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ဘယ်လောက်များ ရိုးသားကြပါသလဲ
ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်သုံးလိုက်တယ်ဆိုတာ ယောက်ျား မသိအောင် ပစ္စည်းပေါ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းစက္ကူကိုများ ခွာဖူးကြပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်၊ ကလေးတွေရဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို ဖအေကြီး မသိအောင် ဖုံးထားတာမျိုးရော ရှိလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို ဖျိုးခနဲ၊ ဖျတ်ခနဲ စိတ်ကစားမိသွားတာကို ခပ်မဆိတ် နေလိုက်ဖူးသလား။
အဲသလိုဆိုရင် အားတက်စရာ စကားလေးတစ်ခွန်း ပြောလိုက်ချင်စမ်းတယ်။ “အဲဒါ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးဗျို့”လို့။
အဲ… ဒါပေမယ့် သက်တမ်းကလေး အထိုက်အလျောက် ရင့်မာလာတဲ့ ကျွန်တော့် လူမှုရေး အတိုင်ပင်ခံ သက်တမ်းမှာတော့ ပြဿနာ တက်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းခံဟာ ရိုးသား ပွင့်လင်းမှု နည်းပါးလွန်းလို့ ဖြစ်နေရတာချည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာကျတော့ အတော့်ကို ခိုင်မာတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ တကယ့် ရေစိမ်ခံ အကြမ်းခံ အိမ်ထောင်ရေးဘဝလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ သည်အခါ ကျွန်တော့်ကို အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ သော့ချက်က ဘာလဲလို့ မေးလာမယ်ဆိုရင် ရိုးသား ပွင့်လင်းမှုလို့သာ တန်းဖြေမှာပါ။ ဒါက အတွေ့အကြုံအရ ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်ကလည်း ဖတ်မှတ် လေ့လာထားသမျှ စာသိနဲ့ ပြောရရင်လည်း အိမ်ထောင်ရေး အတိုင်ပင်ခံတိုင်းကလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ရိုးသား ပွင့်လင်းမှုကသာ အခရာဆိုတဲ့ အဖြေကို တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ပြောကြတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လက်တွေ့ဘဝထဲက အိမ်ထောင်ရေး ၁၀ဝ မှာ ၉၀ လောက်က အိမ်ထောင်ဖက်ချင်း မရိုးသားကြ၊ မပွင့်လင်းကြ၊ မြုံစိစိနိုင်နေကြ၊ မအုံမနွေး လုပ်နေကြ၊ ဖုံးကွယ် သိုဝှက်ထားကြတာတွေက များပါ တယ်။ သည်အခါမှာ ဘာတွေကို မြုံထား၊ ဖုံးထားတတ်ကြပြီး ဘာတွေကိုကျတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပြောတတ်ကြသလဲဆိုတာကို စူးစမ်းကြည့်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိရပြန်တဲ့အခါ စာဖတ်သူများကို မျှဝေပေးချင်လာရပြန်တယ်။
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ၊ ဘယ်သူက ပိုပွင့်လင်းသလဲ?
အခြေခံက စပြောမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးမှာ စကားအပြောဆုံး လူသားတွေက မိန်းမသားတွေပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့် အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းများ ပြောကြစတမ်းဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေက ရှေ့တန်းကနေ ကရားရေလွှတ် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ စစ်တမ်းတစ်ခုအရဆိုရင် အမျိုးသမီး ၈၃ရာခိုင်နှုန်းက “ကျွန်မတို့အိမ်ထောင်အကြောင်း ပြောရအောင်နော်…” ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ အစချီပြီး ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေကို ကိုယ့်လင်သားနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
အဲ… သို့ပေမယ့်လည်း အမျိုးသား ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာ သူတို့ မိန်းမတွေက သည်ကိစ္စကို ပြောဖို့ အစချီတတ်ကြတယ်လို့ ယူဆပါသတဲ့။
ဘာကြောင့် ကိန်းဂဏန်းတွေက အဲသလောက်ကြီး ကွာခြားနေတာလဲ။
“ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချစ်ကိုရယူခြင်း – စုံတွဲများအတွက် လမ်းညွှန်”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးသားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပါရဂူ ဟာဗှစ်လ် ဟဲန်ဒြစ်ခ်စ်က ဖြေပါတယ်။ “ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖော်ပြတတ်ကြတယ်။ အဲသလို ပြတတ်တဲ့ အတွက် အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာတွေ ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်း ဆွေးနွေးဖို့ အစဖော်သူလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ ထင်ကုန်တတ်ကြတာပါပဲ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ယောက်ျားတွေအတွက်က ကိုယ့်ခံစားချက်ကို စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ကျူးဖို့ မိန်းမတွေထက် အပုံကြီး ပိုခက်တာလည်း အမှန်ပဲ”တဲ့။
စစ်တမ်းအရတော့ ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ဆီအထိ သယ်ဖြစ်လာဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတတ်တာဟာ ယောက်ျားတွေ၊ မိန်းမတွေရဲ့ အသက် အရွယ်နဲ့ သိပ်မဆိုင်လှတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“စကားပြောတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရာရာကို ပြောဖို့ဆိုတာကကျတော့ဗျာ…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ ကိုယ်ပိုင်ဘဝဆိုတာတော့ ရှိသင့်ပါတယ်”လို့ အိမ်ထောင်သက် ၁၆ နှစ် ရှိတဲ့ လင်သားတစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်။
အိမ်ထောင်သက် ၃၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ “ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပြဿနာတွေကို ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် လိမ်လိမ်ဖယ်ဖယ်နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ပြဿနာအကြောင်းကို တိုက်ရိုက် မဆွေးနွေးဖြစ်ဘဲ ဝေ့လည်လည် လုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ကျွန်မ မိဘတွေလောက်တော့လည်း မပွင့်လင်းကြဘူးပေါ့ရှင်”တဲ့။
“ကျွန်တော့်မိန်းမကပဲ နေရာတကာမှာ ပြောတာပါဗျာ။ သူပြောလို့ ဝတော့မှ ကျွန်တော်က ပြောတာပါ”လို့ အိမ်ထောင်သက် ၄၃ နှစ် ရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်က ပြောပြန်တယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်တွေ ပြောမပြနိုင်တာတွေက ဘာတွေလဲ?
အဲဒီ့စစ်တမ်းမှာ အံ့ဩစရာကောင်းသွားတာက “ပြောဖြစ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာ”လို့ အိမ်ထောင်သည် အတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေက တဖွဖွ ပြောကြတာပါပဲ။ ယောက်ျားတွေ သိပ်မြုံစိစိ လုပ်တတ်တာပဲလို့ အမျိုးသမီး အစဉ်အဆက်က ညည်းညူတတ်တဲ့ကြားကပဲ စစ်တမ်းအရ တွေ့ရှိရချက်ကတော့ ယောက်ျားတွေလည်း ဘောလုံးပွဲ အကြောင်း၊ ပိုက်ဆံရှာတဲ့အကြောင်းထက်တောင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းကို ပိုလို့ နက်နက်နဲနဲ ပြောချင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ… ပြဿနာက သူတို့ ဘယ်လို ပြောရမှန်း မသိကြတာပါပဲ။
စစ်တမ်းအရ အကြီးမားဆုံး အုပ်စုလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ၃၈ရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားများဟာ သူတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေက သူတို့ကို အခုထက် ပိုပြီး ယုယုယယ ကြင်ကြင်နာနာ ရှိစေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲသလို ကြင်နာ ယုယမှုပေးဖို့ကိုလည်း သူတို့ နှုတ်က ရဲရဲရင့်ရင့် ထွက်ဖြစ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ သည်နေရာမှာ ကြင်နာယုယမှုဆိုတာဟာ ဖိုမဆက်ဆံရေးကိစ္စနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ခင်ပွန်းသည် ပါမောက္ခ ဂျောန် ဂေါ့ထ်မယ်န်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဆီယက်တယ်လ် ဂေါ့တ်မယ်န် တက္ကသိုလ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆေးခန်း တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ပညာ ပါမောက္ခ ဂျူလီ ဂေါ့တ်မယ်န်ကတော့ “ယောက်ျားတွေဟာ ယုယ ကြင်နာမှုကို လိုချင်တယ်လို့ ပြောရမယ့် လူစားတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ တစ်သက်လုံး စွဲမှတ်ထားကြပါတယ်။ ထွေးပိုက်တာ၊ ယုယကြင်နာတာကို ခံချင်တယ်လို့ ပြောတာဟာ ပျော့နွဲ့နွဲ့ယောက်ျားတွေမှ ပြောတတ်တဲ့ စကားမျိုးလို့ စွဲနေကြတာကလား။ အဲတော့ ယုယပါ၊ ကြင်နာပါလို့ ပါးစပ်က ပြောထွက်တဲ့ ယောကျာ်းက လက်တွေ့မှာ ဘယ်နှယောက်ရှိမှာလဲ”လို့ ပြောပါတယ်။
သည်နေရာမှာ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အိမ်ထောင်မကျခင်မှာတော့ ယောက်ျားတွေဟာ ကိုယ့်ကို ကြင်နာပါလှည့်၊ ယုယပါလှည့်၊ သနားပါလှည့်နဲ့ တစာစာ အော်ဟစ် မြည်တမ်းဖို့၊ မျက်ရည်ကျပြဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်ရေးတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်ပြီးချိန်မှာတော့ အဲသလို စကားမျိုးတွေ ပြောလိုက်၊ မျက်ရည်လေး ဝဲပြလိုက်ရင်ပဲ မဟာယောက်ျားမာန မြေသို့ ခတော့မယ့်အတိုင်း ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ ဒါကို ပြောတာပါ။
၂၆ရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျား မိန်းမများကတော့ “ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို သူက ကိုယ့်ကို ဖွင့်မေးစေချင်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ လင်နဲ့ မယားကြားမှာ ဆက်ဆံရေး ပိုမို ပွင့်လင်းလာအောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ အင်မတန် အကျိုးများစေနိုင်တဲ့ နည်းပါ ပဲ။ “မသိ မေး၊ မစင် ဆေး”လို့ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ပိုသိချင်ရင် များများ မေးနိုင်မှ တန်ကာကျမှာပါ။
အဲ… အိမ်ထောင်ရေးတွေမှာ တချို့ကိစ္စတွေကို ဗြောင် ဖွင့် ဆွေးနွေးရ တာခက်လှပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေကျတော့လည်း တစ်ချိန်လုံးကို ပြောဖြစ်နေ တတ်ပြန်ရော။ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသော မိန်းမတွေနဲ့ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားတွေ ဂျီကျတတ်တာကတော့ ဖရိုဖရဲနဲ့ ရှုပ်ပွနေအောင် ကပျစ်ကညစ် နေတတ်တဲ့ကိစ္စဟာ အဓိကဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒုတိယ ဂျီကျတတ်တဲ့ ကိစ္စကတော့ “သိပ်ဝလာပြီ၊ ပိန်အောင်လုပ်စမ်းပါ”ဆိုတာနဲ့ “မင်း ငါ့ကို မဝေဖန်နဲ့”/“တော် ကျုပ်ကို မဝေဖန်နဲ့”ဆိုတဲ့ စကားများပါပဲတဲ့။
“လျှို့ဝှက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ကျွန်မ ညားခဲ့တာပါပဲရှင်၊ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သူ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ပဲ နလံမထူတော့ပါဘူး”လို့ အိမ်ထောင်သက် ဆယ်နှစ် ရှိသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
အိမ်ထောင်သက် ၃၇ နှစ် ရှိသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ “ကျွန်မတို့ လင်မယား အတူနေဖြစ်တဲ့ အချိန်က တော်တော် များပါတယ်။ ကျွန်မ ထင်တယ်လေ၊ အခုခေတ်မှာ လင်မယား တော်တော်များများက ကျွန်မတို့လို အတူနေဖြစ်တဲ့အချိန် သိပ်မရှိကြဘူးလား မသိ…”တဲ့။
ဘာတွေကို အများဆုံး လျှို့ဝှက်ထားဖြစ်တတ်ကြလဲ?
စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေထဲမှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် မသိအောင် လျှို့ဝှက် ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ ရှိလားလို့ မေးကြည့်ပြန်တဲ့အခါ ယောက်ျား ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မိန်းမ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းက သိပ်ရှိတာပေါ့လို့ ဖြေကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကတော့ ရာထူးရာခံ ကြီးကြီးသမားတွေနဲ့ ဝင်ငွေ တအားကောင်းသူတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေမှာဆို ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “တိုးတိုးဖော်အဖြစ် နေခွင့်ရတဲ့ အချိန် နည်းသွားလေလေ၊ ယုံကြည် ကိုးစားမှုလည်း လျော့ပါးလေလေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ လူတွေမှာ ဗာဟီရတွေ သိပ်များလာ၊ စားလည်း အလုပ်၊ သွားလည်း အလုပ်နဲ့ အလုပ် တအား များလာတဲ့အခါ လင်နဲ့မယား အေးအေးလူလူ မနေဖြစ်၊ မတွေ့ဖြစ်၊ မပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး။ အဲဒီ့အခါကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေ လျော့လာတော့တာပါပဲ”လို့ ဂျူလီ ဂေါ့တ်မယ်န်က ပြောပါတယ်။
အိမ်ထောင်သက် အကြာဆုံး အဖိုးကြီး၊ အမယ်ကြီး စုံတွဲတွေမှာက အဲသလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖုံးထားတာက သာတောင် များသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကတော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်ရေး လုပ်တာ ခေတ်မစားသေးခင်ကာလမှာ လူလားမြောက်လာတာနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ သက်ဆိုင်နေနိုင်ပါတယ်။
အဲ… အိမ်ထောင်ရေးတွေမှာ အဖုံးကွယ်ဆုံး၊ အမှန်မပြောဆုံး ကိစ္စက ဘာလဲဆိုတော့ ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းကို ဘယ်လောက် ပေးခဲ့ရတယ် ဆိုတာပါပဲတဲ့ ခင်ဗျား။ အဲဒီ့ မုသာဝါဒကံကိုတော့ ယောကျာ်းမိန်းမ ထက်ဝက် နီးပါး (၄၈ရာခိုင်နှုန်းက) ကျူးလွန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝန်ခံကြပါတယ်။
ဒါဟာ အနီကတ်ပြလောက်အောင် အင်မတန့်ကို အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်းပါပဲလို့ ဂျော်န် ဂေါ့တ်မယ်န်က ပြောပါတယ်။ “သည်နေရာမှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုက အတော် စကားပြောသွားပြီ။ ငွေဆိုတာ လွတ်လပ်မှု၊ ငွေဆိုတာ ဩဇာအာဏာပါ။ သည်ကြားထဲကပဲ၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ယောက်ျားတွေရော၊ မိန်းမတွေပါ လိမ်ဖို့ ဝန်မလေးတာဟာ တော်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယ အလုပ်ဖြစ်ဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ကလေးရဲ့ အမူအကျင့်၊ ဒါမှမဟုတ် ရမှတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း ဖုံးကွယ် လိမ်ညာတတ် ကြတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။ ဒါကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေ (၁၈ ရာခိုင်နှုန်း)က သူတို့ ခင်ပွန်းသည်တွေ မသိအောင် အများဆုံး ဖုံးထားတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
စစ်တမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အထဲက ဝမ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံး အချက်တစ်ချက်ကတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကျဆုံးမှုများကို ကိုယ့်ဇနီးသည်ကို ပြောမပြဘဲ ဖုံးထားတတ်ကြပါပဲ။ “သည်နေရာမှာ ယောက်ျားတွေရဲ့ ဘဝင်က အခရာပါပဲ”လို့ ”ကိုယ်လား၊ မင်းလား”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးခဲ့သူ နယူးယောက် မြို့က စိတ်ပညာရှင် “စကော့တ် ဝက်တ်ဇလာ”က ပြောပါတယ်။
ယောက်ျား ၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မိန်းမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကကျတော့ အစားအသောက် ပျက်နေတာ၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း တရားလွန် စားဖြစ် သောက်ဖြစ် နေတာကို မပြောဘဲ ဖုံးထားကြပြန်သတဲ့။ တစ်မျိုးကြီးပဲနော်။
ကိုယ့်ရဲ့ အဆက်ဟောင်းအကြောင်းကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က သိရဲလား?
တကယ်တော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အတိတ်ဇာတ်လမ်းကို စပ်စုချင်တတ်တာဟာ လူ့သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ဖက်တွေအနေနဲ့ကျ သည်ကိစ္စကို ဘယ်လောက် ပြောဖြစ်ကြလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
အဆက်ဟောင်းတွေအကြောင်း ယောက်ျားတွေ သိရဲ့လားလို့ မေးတဲ့အခါ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီး ၆၂% က “ဒါတွေကို ကျွန်မယောက်ျား အကုန် သိပြီးသားပါ”လို့ ပြောကြပေမယ့် အဲသလို အိပ်သွန်ဖာမှောက် ပြောပြီးသားပါလို့ ဖြေတဲ့ ယောက်ျားကျ ၅၂% သာ ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် ၃၈%သော ယောက်ျားတွေကတော့ သူတို့ဇနီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အတိတ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနည်းအကျဉ်းတော့ သိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့ (၂၂%)ရဲ့အလိုအရ အဲသလို နည်းနည်းပဲ သိကြတာဟာ ဇနီးသည်တွေကိုယ်၌က နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မမေးကြလို့လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ… ၁၇%သော ယောကျာ်းတွေကတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က အကုန် ပြောပြဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပြန်တယ်။
သည်အထဲမှာ ယောကျာ်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မိန်းမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာ သူတို့ရဲ့ အဆက်ဟောင်းတွေအကြောင်းကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို လုံးလုံး ပြောမပြခဲ့ဘူးလို့ ဖြေပါတယ်။
ဒါတွေကို ပြောခြင်း၊ မပြောခြင်း၊ သိခြင်း၊ မသိခြင်းဟာ အရေးကြီးသလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အတိတ်က အဖြစ်မှန်တွေ သိရခြင်း၊ မသိရခြင်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူးလို့ ဝက်ထ်ဇလာ ကတော့ ဆိုပါတယ်။ “လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည် ကိုးစားဖို့အတွက် အဲဒီ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို အူမချေးခါး မကျန် သိထားမှ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကတော့ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်စမြဲပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကျတော့ ကိုယ်အကုန်သိတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ယုံကြည်နေရင် ပြီးသွားတာပါပဲ”လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အိပ်သွန်ဖာမှောက်ပဲ ပြောပြထားထား၊ ဘာမှ မပြောဘဲ ထားထား၊ တစ်ချို့တစ်ဝက်ပဲ ပြောထားထား၊ ကြားရတဲ့ သူအဖို့ သူ ကြားလိုက်ရသလောက်က အကုန်လို့ ယုံမှတ်နေသမျှ အဟောဝတဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုတာ အသက်ဝိဉာဉ်ကင်းမဲ့သွားတာမဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်သည်တွေမှာလည်း သူ့ဟာလေးနဲ့သူ ကြိတ် ဖြစ်နေတဲ့ အဆိုးအပြစ်လေးတွေ ရှိကြစမြဲပါပဲ။ စစ်တမ်းရ ယောကျာ်း ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မိန်းမ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် မဟုတ်တဲ့ တခြားသူ တစ်ယောက်ယောက်အပေါ်မှာ ဖျိုးခနဲ ဖျတ်ခနဲလောက်လေးပဲ ဖြစ် ဖြစ်၊ လှစ်ခနဲ စိတ်ကစားလိုက်တာလေးကို ဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖော်အချွတ်တွေပါတဲ့ မီဒီယာတွေကို ကြည့်ဖြစ်မှန်း၊ ကြည့်ရတာ ဝါသနာပါမှန်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ဖွင့်မပြောတဲ့ ယောက်ျား ကလည်း ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ သိရပြန်တယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကိုရော ပြောပြတတ် ကြသလား?
စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ၊ စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန့်မြုးတာတွေကို ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက်ကို ပြောပြဖူးပါသလားလို့ မေးတဲ့အခါ စစ်တမ်းမှာပါတဲ့ ကျားမ ငါးယောက်မှာ တစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူး အိပ်မက်ကလေးကို ကိုယ့်ဘာသာ တိတ်တိတ်ကလေးပဲ ဝှက်ထားတယ်လို့ ဖြေကြပြန်တယ်။
ဒါ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် သိစရာမှ မလိုတာလေတဲ့။ သုတေသီတွေထဲက ဂျူလီ ဂေါ့တ်မယ်န်ကတော့ သည်အဖြေကြောင့် တော်တော့်ကို စိတ်ပျက် လက်ပျက် ဖြစ်ရကြောင်း ပြောပါတယ်။ “စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံး အပိုင်းပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအနေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အဲဒီ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ဖွင့်ပြောဖြစ်ဖို့ အတွက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ချနေမှ ဖြစ်မှာပါ။ အခု ရလာဒ်အရ ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ရှင် ငါးစုံမှာ တစ်စုံကတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်မချနိုင်၊ မယုံကြည်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေတယ်”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်သူများအနက် ထက်ဝက်ထက် ပိုတဲ့ အရေအတွက် (၅၆%)က တိတ်တိတ်ကလေး ကြိတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေသူတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်ထက် နည်းသူတွေမှာ ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အတူ ခရီးယာယီ သွားလိုက်ချင်ပေမယ့် အဲဒီ့ကိစ္စကို လေသံတောင် မသလပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့။ တချို့ (၅၃%)ဆိုရင် တစ်ရပ်တစ်ကျေးကို ပြောင်းနေချင်တာ၊ တချို့ (၄၂%)က တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားချင်တာ၊ တချို့ (၄၁%)က အလုပ်အကိုင် ပြောင်းချင်တာ၊ တချို့ (၂၁%)က ခဏလောက် တစ်ယောက်တည်း နေချင်တာ၊ တချို့ (၁၄%)က အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု ကျူးလွန်ချင်တာတွေကို စိတ်ထဲမှာပဲ တနုံ့နုံ့နဲ့ ကြိတ်ပြီး အိပ်မက်မက်နေကြပါသတဲ့။ အဲ… တချို့(၁၀%)ဆို ခွေးမွေးချင်တာတောင် အိမ်ထောင်ဖက်ကို ပြောမထွက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာကြောင့် အဲသလို ကိုယ့်စိတ်ကူး၊ ကိုယ့်အိပ်မက်ကို ပြောမထွက်ကြတာလဲ။
“သည်လို စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ပြောလိုက်တာဟာ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ အနေအထားအတွက် အင်မတန် အန္တရာယ် များလို့ပါ။ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို ပြောလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိ အနေအထားကို သိပ်မနှစ်မြို့တော့တဲ့ သဘောက အလိုလို သက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ ဘယ်ကဲ့သို့ ဘယ်ချမ်းသာ ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို ပြောပြလိုက်ရင် ကြားရသူမှာ ရင်သပ်ရှုမောနဲ့ မတ်တတ်က လဲသွားနိုင်တယ်လို့ လူအတော်များများက ထင်ကြတယ်”လို့ ဂျော်န် ဂေါ့ထ် မယ်န်က ဆိုပါတယ်။
သည်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ရို့ဒ်ကျွန်းက စိတ္တဗေဒ ပါရဂူ ဆရာဝန်ကြီး “ပီတာ ခရာမာ”က အိမ်ထောင်ရေးကို စဉ်းစားတဲ့အခါ အခုထက် ပိုပြီး ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်း စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးပါတယ်။ “လူတွေအနေနဲ့ ခဏတဖြုတ်လေးလောက် ယာယီ ထွက်ပေါက်၊ ယာယီ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ချင်ကြတဲ့အခါမှာ အဲဒါလေးကြောင့် တစ်ဘဝလုံးစာ ရည်မှန်းထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘဝကြီးကို အစွန်းအထင်း မခံသင့်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်မှာ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကော်လာဖြူ (ရုံးဝန်ထမ်း) တစ်ယောက်ပေါ့။ သူက တစ်နှစ် တစ်ခါတော့ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောနဲ့ တစ်ယောက်တည်း တစ်လလောက် ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အိမ်ထောင်ရေးလည်း အဆင်ပြေနေတာပါပဲ။ ဆိုလို တာက အိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညှိယူလို့ ရတာတွေ အများကြီးပါဗျာ“လို့ သူကပြောပါတယ်။
အလွယ်ဆုံး နည်းက ဘာလဲ?
စစ်တမ်းမှာ အိမ်ထောင်သည်တွေကို တစ်ခု ထပ်မေးကြည့်ကြပါသေးတယ်။ မနက်အိပ်ရာက နိုးလာတဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက် ချက်ချင်း ကိုယ်ဟာ အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူးလို့များ မခံစားချင်ကြဘူးလား၊ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံကြစမ်းပါလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ၁၆ရာခိုင်နှုန်းသော ယောကျာ်းများရော၊ မိန်းမများပါ ဟုတ်တယ်၊ အဲသလို သိပ်ဖြစ်ချင်တာပဲလို့ ပြောကြပါတယ်။
“သည်အဖြေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ လူတွေဟာ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးထဲကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲသလို မကျေမနပ် ဖြစ်နေတာကိုကျတော့ ဝန်မခံ ချင်ကြပြန်ဘူး”လို့ ဝက်ထ်ဇလာက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝက်ထ်ဇလာ့အဆိုကို ဒေါက်တာ ခရာမာက သဘောမတူ ပါဘူး။ “သည်လို စိတ်ကူးယဉ်တာမို့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပြဿနာ ရှိနေတယ်လို့ သွား အနက်ကောက်မယ်ဆိုရင် တက်တက်စင် မှားသွားမှာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးခရီးဆိုတာ တကယ့်ကို အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ ဝါယမ စိုက်ရတာမျိုးမို့ မောပန်းနွမ်းလျနေလို့ ပြောတဲ့စကားတွေပါ”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဆိုတော့ အကုန်လုံး အိပ်သွန်ဖာမှောက် ပြောပြဖို့ အရေးကြီးသလားလို့ မေးကြည့်ပြန်တဲ့အခါ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်တိတိ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားကြီးကတော့ “သိပ်ပြောသင့်တာပေါ့ဗျာ။ ဘာမှ မချန်ကြေး၊ ကောင်းတာရော၊ ဆိုးတာရော၊ အကုန်သာပြော။ အဲဒါဆို အဲသည့် အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်ပြီသာ မှတ်”လို့ ဖြေပါတယ်။
အိမ်ထောင်သက် ၃၃ နှစ် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးကလည်း “တစ်ဖက်သားက ဆက်မကြားချင်တော့တဲ့ အရိပ်အရောင် မပြမချင်းတော့ အိပ်သွန် ဖာမှောက် ပြောနိုင်သမျှ ပြောသင့်တယ်”လို့ ဆိုလိုက်ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ယောက်ကကျပြန်တော့ “အဲသလို ပြောလိုက်ရင် ကိုယ့်လည်ပင်း ကိုယ် အရှင်လတ်လတ် ကြိုးကွင်းစွပ်သလို ဖြစ်သွားမှာပေါ့”ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပြောရေးဖက်က အဆိုကို ကန့်ကွက်ပြန်တယ်။
ကိုင်း… အိမ်ထောင်ရေး ပုံစံ သုံးမျိုး ထွက်မလာပေဘူးလား။ အမြင်ကလည်း သည်မှာတင် သုံးမျိုးကွဲနေတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေထဲမှာတင် အကုန်လုံး ပြောသင့်တယ်ဆိုတဲ့သူက တစ်ယောက်၊ တစ်ဖက်သား နားခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ ပြောသင့်တယ်ဆိုတဲ့သူက တစ်ယောက်၊ မပြောသင့်ဘူးဆိုတဲ့ သူက တစ်ယောက် ဆိုပြီး သုံးစား ကွဲနေတယ်။
ပညာရှင်တွေကရော ဘယ်လို ပြောကြတယ် မှတ်လဲ။
ဒေါက်တာ ခရာမာကတော့ “သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာဟာ အားလုံး ဖွင့်ပြောခြင်း မပြောခြင်းအပေါ်မှာ မတည်ပါဘူးဗျာ။ တစ်ခါ တစ်ခါကျတော့ ပြောလိုက်တော့မှ တစ်ဖက်လူမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေ ဖြစ်ပြီး ဆောက်တည်ရာမရတွေလည်း ဖြစ်ကုန်နိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား”လို့ ပြောပါတယ်။
ပါမောက္ခဂေါ့ထ်မယ်န်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းမှာ အိမ်ထောင်ရှင် စုံတွဲပေါင်း ၃၀ဝ၀ ကျော်ကို လေ့လာစူးစမ်း မှတ်သားခဲ့ကြသူများပါပဲ။ သူတို့ကလည်း ရက်စက်တဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဟာ အခါခပ်သိမ်းတော့ မသင့်တင့် မလျောက်ပတ်လှဘူးလို့ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ဒေါက်တာခရာမာရဲ့အဆိုကို သဘောတူကြပါတယ်။
လေးနက်ခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းရပ် တွေကို ပြောနိုင်ဖို့အတွက် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှုဆိုတဲ့ အုတ်မြစ်အပေါ်မှာ အခြေခံရမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ “တော်တော်ကြီးကို အကဲဆတ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို ပြောချင်တဲ့အခါမှာ အရေးမပါလှတာကနေ မစဘဲ စိတ်ထိခိုက်စရာ အကောင်းဆုံးနေရာက စ ပြောတာ ပိုကောင်းတယ်”လို့ ဂျော်န် ဂေါ့ထ်မယ်န်က ပြောပါတယ်။
ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ဘာတွေ တွေးနေလဲဆိုတာ အမှန်အတိုင်း သိအောင် အရင် လုပ်သင့်တယ်လို့လည်း သူက အကြံပေးပါတယ်။
အထက်မှာ တစ်လျှောက်လုံး ကိုးကားခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းကို ၂၀ဝ၁ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်မှ မတ်လ ၃၁ ရက်အတွင်းမှာ တယ်လီဖုန်းနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဖြေကြားသူတွေကတော့ အသက် ၁၈ နှစ် အထက် အိမ်ထောင်ရှင်ပေါင်း ၁၀ဝ၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရှင်တွေကို အတူယှဉ်တွဲပြီး မေးခဲ့တာ မဟုတ်သလို ကိုယ့်ပြောစကားကို ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်သား မကြားစေရအောင် စီစဉ်ပြီးမှ မေးမြန်းခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဒါတွေကိုဖတ်ပြီး စာဖတ်သူများကို ပြန်ပြောပြဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ သူများတကာရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စတွေမှာလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အကျိုးဆောင်ပေးနေသူလည်း ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်ကိုယ်၌က အလုံးစုံ ရိုးသား ပွင့်လင်းရေးမူကို စွဲမြဲ လက်ခံ ကျင့်သုံးနေတာမို့ အိမ်ထောင်ရေး အပါအဝင် ဘယ်ဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်ဖြစ် ပွင့်လင်းရိုးသား တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်လေ၊ နေရထိုင်ရတာ လိပ်ပြာ သန့်လေ၊ ဆက်ဆံရေးလည်း ပိုမို တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလေလို့သာ ယုံကြည် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါ ကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်းရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အယူအဆပါ။ စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများ အားလုံးမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် ဆင်ခြင်ဉာဏ်များ အသက အသကနဲ့ ဖြစ်ကြတာမို့ ကျွန်တော် ပြောတာကို ယတိပြတ် လက်ခံရမယ်လို့ မပြောဝံ့ပါဘူး။ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ချင့်ချိန် စဉ်းစားကြပြီး အကောင်းဆုံးလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ကြအောင် ကျွန်တော် ဖတ်မိလိုက်သမျှ ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပေးလိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Source: How Honest Are Couples, Really? by Louise Lague from the August 2001 issue of Reader’s Digest)
(၂၀၀၃ ခုနှစ် မတ်လထုတ် သရဖူမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
ppfwrf;rSm tdrfaxmifonfawGudk wpfck xyfar;MunfhMuygao; w,f/ reuftdyf&muEdk;vmwJhtcgrSm ½kwfw&uf csufcsif; udk,f[m tdrfaxmifonfwpfa,mufr[kwfawmhbl;vdkYrsm; rcHpm;csifMubl;vm;? trSeftwdkif; 0efcHMuprf;ygvdkY ajymwJhtcgrSm 16&mcdkifEIef;aom a,mufsm;rsm;a&m? rdef;rrsm;yg [kwfw,f? tJovdk odyfjzpfcsifwmyJvdkY ajym Muygw,f/
]onftajz&JU t”dyÜm,fuawmh vlawG[m udk,fa&mufaewJh tdrfaxmifa&;xJuae ½kef;xGufzdkY cufaewJhtcg udk,fhb0udk,f raus reyfjzpfaeMuw,f/ tJovdk rausreyfjzpfaewmudkusawmh 0efrcH csifMujyefbl;}vdkY 0ufxfZvmu qdkygw,f/
‘gayr,fh 0ufxfZvmhtqdkudk a’gufwm c&mrmu oabmrwl ygbl;/ ]onfvdk pdwful;,OfwmrdkY tdrfaxmifa&;rSm jyóem&dSae w,fvdkY oGm; teufaumufr,fqdk&if wufwufpif rSm;oGm;rSmyg/ tdrfaxmifa&;c&D;qdkwm wu,fhudk tm;BudK;rmefwufeJY 0g,rpdkuf& wmrsdK;rdkY armyef;EGrf;vsaevdkY ajymwJhpum;awGyg}vdkY oluqdkygw,f/
qdkawmh tukefvHk; tdyfoGefzmarSmufajymjyzdkY ta&;BuD;ovm;vdkY ar;MunfhjyefwJhtcg atmifjrifwJhtdrfaxmifa&;udk ESpfaygif; av;q,f wdwdjzwfoef;cJhzl;wJh trsdK;om;BuD;uawmh ]odyfajymoifhwmayghAsm/ bmrS rcsefaMu;? aumif;wma&m? qdk;wma&m? tukefomajym/ tJ’gqdk tJonfh tdrfaxmifa&; cdkifNyDomrSwf}vdkY ajzygw,f/
tdrfaxmifouf 33ESpf&dScJhNyDjzpfwJh trsdK;orD;BuD;uvnf; ]wpf zufom;u qufrMum;csifawmhwJh t&dyfta&mif rjyrcsif;awmh tdyf oGefzmarSmuf ajymEdkiforQ ajymoifhw,f}vdkY qdkvdkufjyefw,f/ ‘gay r,fh aemufwpfa,mufuusjyefawmh ]tJovdk ajymvdkuf&if udk,fh vnfyif;udk,f t&Sifvwfvwf BudK;uGif;pGyfovdk jzpfoGm;rSmaygh}qdkwJh pum;eJY ajyma&;zufu tqdkudk uefYuGufjyefw,f/
udkif;… tdrfaxmifa&; yHkpHoHk;rsdK; xGufrvmaybl;vm;/ tjrifu vnf; onfrSmwif oHk;rsdK;uGJaew,f/ tdrfaxmif&SifawGxJrSmwif tukefvHk; ajymoifhw,fqdkwJholu wpfa,muf? wpfzufom; em;cH EdkifwJhtwdkif;twmtxd ajymoifhw,fqdkwJholu wpfa,muf? rajymoifhbl;qdkwJh oluwpfa,mufqdkNyD; oHk;pm; uGJaew,f/
ynm&SifawGua&m b,fvdk ajymMuw,frSwfvJ/
a’gufwm c&mrmuawmh ]om,mwJh tdrfaxmifa&;qdkwm[m tm;vHk;zGifhajymjcif; rajymjcif;tay:rSm rwnfygbl;Asm/ wpfcg wpfcgusawmh ajymvdkufawmhrS wpfzufvlrSm pdwftaESmifht,SufawG jzpfNyD; aqmufwnf&mr&awGvnf; jzpfukefEdkifao;w,fr[kwfvm;}vdkY ajymygw,f/
ygarmu©a*ghxfr,fefwdkY ZeD;armifESHuawmh ESpfaygif; ESpfq,f ausmftwGif;rSm tdrfaxmif&SifpHkwGJaygif; 3000ausmfudk avhvmpl;prf; rSwfom;cJhMuolrsm;ygyJ/ olwdkYuvnf; &ufpufwJh½dk;om;ajzmifhrwfrI [m tcgcyfodrf;awmh roifhwifh ravsmufywfvSbl;vdkYqdkwJhpum;eJY a’gufwmc&mrm&JUtqdkudk oabmwlMuygw,f/
av;eufcufcJwJh taMumif;&yf awGudk ajymEdkifzdkYtwGuf &if;ESD; uRrf;0ifrIqdkwJh tkwfjrpftay:rSm tajccH&r,fvdkYvnf; qdkygw,f/ ]awmfawmfBuD;udk tuJqwfwJh udpöwpfckckudk ajymcsifwJhtcgrSm ta&;rygvSwmuae rpbJ pdwfxdcdkufp&mtaumif;qHk;ae&mu p ajymwmydkaumif;w,f}vdkY a*smfef a*ghxfr,fefu ajymygw,f/
yxrqHk;tqifhtaeeJYuawmh udk,fhtdrfaxmifzuf bmawG awG; aevJqdkwm trSeftwdkif; odatmif t&ifvkyfoifhw,fvdkYvnf; olu tMuHay;ygw,f/
txufrSm wpfavQmufvHk; udk;um;cJhwJh ppfwrf;udk 2001ckESpf rwfv (19)&ufrS rwfv (31)&uftwGif;rSm w,fvDzkef;eJY vkyfcJhwm yg/ ajzMum;olawGuawmh touf 18ESpftxuf tdrfaxmif&Sifaygif; 1000jzpfygw,f/ ‘gayr,fh tdrfaxmif&SifawGudk twl,SOfwGJNyD; ar;cJhwmr[kwfovdk udk,fhajympum;udk udk,fhtdrfoltdrfom; rMum; ap&atmif pDpOfNyD;rS ar;jref;cJhwmvdkY od&ygw,f/
‘gawGudkzwfNyD; pmzwfolrsm;udkjyefajymjyjzpfaewJhuRefawmfu awmh tdrfaxmif&Sifwpfa,mufvnf;jzpf? olrsm;wum&JU tdrfaxmif a&; udpöawGrSmvnf; twwfEdkifqHk; tusdK;aqmifay;aeolvnf;jzpf wJhtjyif uRefawmfudk,füu tvHk;pHk ½dk;om;yGifhvif;a&;rludk pGJjrJ vufcH usifhoHk;aewmrdkY tdrfaxmifa&;tygt0if b,fqufqHa&;rSm jzpfjzpf yGifhvif;½dk;om; wnfMunfajzmifhrwfav? ae&xdkif&wm vdyf jymoefYav? qufqHa&;vnf; ydkrdkwdk;wufjzpfxGef;avvdkYom ,HkMunf ygw,f/
‘gayr,fh tJ’g uRefawmfh wpfOD;wnf;&JU yk*¾vdu t,ltqyg/ pmzwfolvlBuD;rif;rsm; tm;vHk;rSmvnf; udk,fydkif qifjcifÓPfrsm; tou toueJY jzpfMuwmrdkY uRefawmfajymwmudk ,wdjywfvufcH &r,fvdkY rajym0Hhygbl;/ rdrdwdkY udk,fydkifÓPfeJY csifhcsdefpOf;pm;MuNyD; taumif;qHk;vrf;udk a&G;cs,fEdkifMuatmif uRefawmff zwfrdvdkuforQ jyefvnf azmufonfcsay;vdkufwmom jzpfygw,f/
Author lettwebawPosted on 29 September 2009 17 February 2010 Categories Love & Marriage, Reproduction
5 thoughts on “How Honest Are Couples, Really?”
29 September 2009 at 5:33 pm
အ၇မ်းကို စိတ်ဝင်စားပီး သင်ခန်းစာယူသင့်တဲ့ပို့စ်ပါပဲ။
30 September 2009 at 10:34 am
“ပွင့်လင်းရိုးသား တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်လေ၊ နေရထိုင်ရတာ လိပ်ပြာ သန့်လေ၊ ဆက်ဆံရေးလည်း ပိုမို တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလေ”
အဲ့ဒါ အမှန်ပဲ..ဒီအယူအဆ ကိုလက်ခံပါတယ် 🙂
eain eain says:
30 September 2009 at 2:08 pm
comments ရေးတဲ့ထဲမှာ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းမပါဘူးနော်…အပျိုကြီးတွေထင်တယ်..ဟိဟိ…
13 December 2014 at 4:08 pm
ပွင့်လင်းရိုးသားတာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာဟာ တကယ်စွဲစွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိရင်တော့ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အိမ်ထောင်သက်အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင်တော့ အဲဒါဟာအခါခပ်သိမ်းမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်ကိုကြီးကျော်ခင်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်မှာခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ (၅) နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဖခင်ဆုံးပါးခဲ့ပြီး အသက်(၂၇)နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါ မှာမှ ယောက္ခမဖခင်ကြီးကိုအဖေဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါဟာရကို ပြန်လည်သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာပွင့်လင်းရိုးသားသူ တစ်ယောက်(ကိုယ်ရည်သွေးခြင်းမဟုတ်ပါ) ဖြစ်လေတော့
ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့အဲဒီယောက္ခမကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းက အင်မတန်သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ဆိုတာ ကို သူ့စကားနားမထောင်မိတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီးမှ နောင်တရမိရပါတယ်။သူပြောတဲ့စကားက မိန်းမ(ကျွန်တော့်ဇနီး သူ့သမီး)ကို စကားတွေအကုန်မပြောနဲ့ကွ၊ နားငြီးတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းပဲခံရမှာတဲ့။အဲဒီဆုံးမစကားကြားပြီးစက ဆိုလိုရင်းကို သဘောမပေါက်သေးတော့ တစ်ခုမကျန်မထိန်မချန်ပွင့်လင်းစွာနဲ့မိန်းမအပေါ် ရိုးသားမိတဲ့ ကျွန်တော်မျိုးမောင်အောင်မောင်းလေးခမြာမှာ တစ်ညလုံးမအိပ်ရအောင်နားပူတဲ့ဒုက္ခကို အကြိမ်ကြိမ်ခံစားလိုက်ရပြီးသကာလမှာ တချို့ကိစ္စတွေ(ဖောက်ပြန်သောကိစ္စများ မဟုတ်ပါ)မှာ လိမ်မပြောချင်သူကျွန်တော်တေမိမြုံစိ ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
30 December 2014 at 12:21 pm
ပွင့်လင်းမှုကို အားပေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က မလွဲမသွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သည်အချက်ကို ပိုသတိထားသင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို မလိမ်စေချင်ရင် သူတို့ အမှန်ပြောတဲ့အတွက် ချီးကျူးပေးရမှာ ဖြစ်သလို သူတို့ အမှားကျူးလွန်ထားသည့်တိုင် အမှန်အတိုင်း ပြောတာဖြစ်နေလို့မို့ ဆူပူတာတွေ၊ အပြစ်ပေးတာတွေ မလုပ်အပ်ပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း ပြောပါလျက်နဲ့ ဆူပူ မောင်းမဲ အပြစ်ပေးတာတွေ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေဟာ အမှန်ကို ဘယ်တော့မှ ပြောတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နားညည်းအောင် ပြောတတ်တဲ့ ဇနီးကို အပြစ်တင်မယ့်အစား အမှန်အတိုင်း မပြောဖြစ်တော့အောင်၊ မြုံစိစိ ဖြစ်သွားအောင် လုပ်နေရာ ရောက်တဲ့အကြောင်းသာ သူနားလည်အောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုပါ ဆန့်ထုတ် စဉ်းစားသင့်တယ်ခင်ဗျ။
Previous Previous post: Audio: This Time Last Year
Next Next post: Modcons and Foremost Teachers
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ - ၇